Pyonepan Way: August 2013
ပျံ့လွင့်လာတဲ့ စကားသံတွေက ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ပေမယ့် နားထဲရောက်လာတာမို့ ကြားနေရတယ် ။ ကြားလိုက်မိတော့ ရင်မောပြန်တယ် ။ လူတွေ ရဲ့ အတွေးခေါ် အယူဆတွေ ဘာကြောင့် ဒီလောက်ထိ ပေါ့တန် သိမ်ဖျင်းလာရသလဲ ။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ မကြားချင်လည်းကြးနေရတယ် ။ မမြင်ချင်လည်း မြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ ၊ အသံတွေကို မုန်းလာသလိုထိ ရင်ထဲမှာ ခံစားလာရတယ်ဆို ပိုလိုက်တာလို့ ပြောကြမလား မသိဘူးနော် ။ ယနေ့ ခေတ်စားလာတဲ့ ချက်တင် ချစ်သူတွေ ၊ ဖုန်းချစ်သူတွေ အဖြစ်ပေါ့ရှင် ။ facebook မှာရေးထားတဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကို ကြည့်ပြီး သူ့ကိုရေးထားတာတွေကို အဟုတ်တွေမှတ်နေကြတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ။ ပညာတွေ သင်ထားတာ အလကားမှ မဟုတ်တာဘဲ ။ လေ့လာပါ ၊ တွေးပါ ၊ ဆင်ခြင်ပါ လို့ပြောချင်မိတယ် ။ပြောတိုင်းယုံနေရအောင် ကျွန်မတို့ကို မိဘမွေးထဲက ဦးနှောက်ဆိုတာ ထည့်ပေးထားတယ် ။ ဒါအလကားထားဖို့မှ မဟုတ်တာ ။ ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်တဲ့ နေရာမှာ သူ့ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေ ၊ သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထက် အဓိကထား ရွေးချယ်ရမယ့် အချက်တွေရှိပါတယ် ။
Posted by Pyonepan Way at 4:48 AM No comments:
လိမ်ညာ လှည့်စားသော စကားများ
Posted by Pyonepan Way at 8:34 PM No comments:
မကွယ်မ၀ှက် ဖွင့်ပြောတတ်တာဆိုရင် …။
အထက်စီးက ဆက်ဆံခွင့်ရတာဆိုရင် …။
~ မင်းလူ ~
Posted by Pyonepan Way at 4:07 AM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 4:51 PM No comments:
မိန်းမတစ်ယောက်က ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ချစ်ပြီ ဆိုတဲ့အခါ မိန်းမရဲ့ ဘဝဟာ
ယောက်ျားရဲ့ ဘဝထဲကို အလိုအ လျောက် စီးဝင် သွားရတယ်။
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ကိုယ်ဘာတွေ ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ဟာ မိန်းက﻿လေးတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်။
ဒါဟာ မိန်းက﻿လေး﻿တွေ ရဲ့ ဗီဇစိတ်သာ ဖြစ်တယ်။စွန့်လွတ် အနစ်နာခံ မှု လည်း မဟုတ်ဘူး။
ဒါဟာ အလို အ လျောက်ဖြစ်ပေါ် တဲ့ အညံ့ခံစိတ်ပါ။ ဒါကို မြင့်မြတ်မှုလို့ ကိုယ် မ ပြောလိုပါဘူး။
ဖြစ်ချင်းဖြစ် ရင် ဒါဟာ မိုက်မဲမှု သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by Pyonepan Way at 9:19 AM No comments:
ဖတ်ဖူးတာ စာတအုပ်၊ကဗျာစုတ်နဲ့ မာန်ထချင်၊မသာရုပ်နဲ့ ဟန်လှပြင်၊မှန်စွထင် နေသည့်ဖား၊
ရေတွင်းထဲ အဆာကျယ်၊ကမ္ဘာနယ် မသိရှာပါလား။
စာတမူးနဲ့ ကဗျာရူးပြန်၊ခြာတူးလန် ငကြွား၊ပြာကလူးညံ စကားတွေက၊နှစ်ပြားမှ မတန်၊
ပေါကြောင်ကြောင် ဝင်ဝင်ပြောတော့၊တသောသော ရယ်ရတာအမှန်။
ငွေတကျပ်နဲ့ သူဋ္ဌေးဟန်၊အတွေးမမှန် အရှက်မဲ့စွာနဲ့၊သူဟာတဲ့ ပညာရှင်၊ဟားတိုက်ရယ်ချင်၊
ခွေးမိုက်က လမင်းဟောင်ချင်၊မြဆင်းရောင်စဉ် ပိုလင်းသတဲ့လေး။ ။
(သောက်မြင်ကပ်ဘွဲ့ - တေးထပ်)Credit To ဦးဟယ်ရီလွင်
လာဟေ့ ......... " ယောင် ၀ါး ဂွမ်း "
ဟန်ကိုယ်ဖို့ မှင်သေသေ မဟာဝေလေလေ မင်းသား လူကြား သူကြား ခဏခဏ
ပေါက်ကရ ပညာတွေ ထုတ်ထုတ်ပြ . . .
သူများ ၀တ္တုဆို လိုက် ထု သူများ ကဗျာဆို လိုက် ဗျာ သူများ ဆောင်းပါးဆို လိုက် ပါး
ဖတ်နေတဲ့ လူတွေကို မငဲ့ တတ်သိတဲ့ လူတွေကို မရှက်
ရုပ်တည်ကြီး နဲ့ဝေဖန် လူဝင်ဆန့် ရန် အကြံ နဲ့ ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက် လုပ်ချင်သေးရဲ့ . . .
အသိညဏ် လက်တစ်ဆစ် အရေးအသား ဆိုးညစ် ပညာပေးရေးသယောင် နဲ့မိုက်ရိုင်းတတ်တဲ့ မောင်
အဲ့သလို ငကြောင်စာတွေကိုပဲ အားပေးသူတွေ များပါသေးသတဲ့
ကြွားချင်စိတ်နဲ့လဲ လျှောက်အော် ကိုယ့်ဂုဏ် ကိုယ်ဖော် မသူတော် . . .
သူ ရေးသမျှတွေမှာ အနှစ်သာရ လဲ မပါ သုတရသ အကာ ပရိတ်သတ်ကို မှိုင်းတိုက်သည့်အခါ
အဲ့ဒီ လူ့ပေါက်ပန်း ခမျာ ဟို စကားပုံ ပမာ အသိညဏ်နည်းနည်းဟာ အန္တရယ်သာ . . ."
Posted by Pyonepan Way at 4:22 AM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 7:19 PM No comments:
တောင်ပံအစုံကို… ဖြန့်လို့.. အဝေးဆုံးကို… ပျံသန်းချင်နေတဲ့…
အကြီးမားဆုံး.. အဟန့်အတား တစ်ခုပဲပေါ့ကွယ်….။
အစိုးမရတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ ငှက်ကလေးရေ….
နင့် စိတ်တွေ မနွမ်းလျရပါစေနဲ့လို့..
မခန်းသေးတဲ့… စမ်း တစ်သွယ်… ရှိနေခဲ့တာ..
လည်ပတ်တတ်သော… စက်ဝန်း တစ်ခု….
တစ်နေ့ တစ်ကွေ့… ပြန်တွေ့ဖြစ်တဲ့အခါ…
တစ်နေ့ တစ်ချိန်မှာ …. သတိရတတ်ခဲ့လျှင်….
ပေးအပ်ခဲ့ဖူးသော… အပြုံးတစ်စရဲ့ အလှ…
နင်… ထာဝရ လွမ်းတတ်သွားမှာပါ …..။ ။
(ပေးအပ်ခဲ့ဖူးသော… အပြုံးတစ်စက … ထာဝရ လှပနေမှာပါ…..။)
ထာဝရ " နွေဦးမေ "
Posted by Pyonepan Way at 4:16 PM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 7:27 PM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 2:52 AM No comments:
အထီးကျန်နေတဲ့ ငါ့ Chat Box လေး
ငါ့အတွက် ဒီညလည်း နင့်ကိုစောင့်ရင်း
Posted by Pyonepan Way at 11:01 PM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 5:01 AM No comments:
လဲနေသူကိုပြန်ထ စေချင် ရင်တော့ဝင် တွဲပေးမှပဲရမယ်
နုတ်ဖျားပေါ်က စေတနာဆိုတာကို ခပ်ညံ့ညံ့ချစ်တီးကုလားက တောင် အ ပေါင် မခံတော့ပါဘူးတဲ့
သုဝဏ္ဏဆိုတဲ့ ငနဲတွေခမြာတော့ခုချိန်ထိ ကျော်ပေါ်ကဒါဏ် ရာတွေကို ဆေးလိမ်းနေရတုန်း ။
လျှာဆိုတာ ကျောရိုးမဲ့တော့လည်းလိမ်လို့လှည့်လို့ ကောင်းတာပေါ့လေ့
Posted by Pyonepan Way at 11:44 AM No comments:
အားငယ်မှု။ကျရူံးမှုတွေနဲ့ကြုံတဲ့ အခါတိုင်း အနားမှာနေပြီးအတူတကွ ဖြေရှင်းပေးတတ်တဲ့လူမျိုးပါ...
ကိုယ်ကလွဲရင်ဘယ်သူ့ကိုမှမယူဘူး ဆိုတဲ့လူထက်...ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုပဲရွေးချယ်တဲ့လူမျိုးပါ...
Posted by Pyonepan Way at 8:53 AM No comments: